HomeArimaha QoyskaU Gaar Ah Dumarka: Wado Lama Filaan Ah Oo Aad Ku Ogaan Karto In Uu Gacaliyahaagu Gabadh Kale Kula Khiyaamayo
Ninka Khiyaamoolaha Ah ayaa isku daya in uu wado walba ku qariyo Khiyaamada uu ku wado gacalisadiisa ahna xaaskiisa iyo waliba in uu mar walba muujiyo in uu yahay nin daacad ah oo qadariya xaaskiisa.
Laakiin khiyaamada ayaan mar walba qarsoodin iyada oo Ninka khiyaamaynaya xaaskiisa mar un ku dhacayo khalad muujinaya khiyaamadiisa.
Xaqiiqada ayaa ah in ay jirto Arimo iyo waliba khaladaad uu isla ninku galo oo muujinaysa khiyaamada uu ku wado xaaskiisa waana marka uu Nin walba ugu necebyahay adduunka oo dhan.
Hadaba waxa aan halkan ku soo bandhigi doonaa 4 wado oo aad Gabadheey ku ogaan karto in uu Gacaliyahaagu gabadh kale kula khiyaamaynayo ama kugu garab wado.
Kulanka Sariirta ayaa Kashifa Khiyaamada Ragga:
waxa jirta xog lagu helay in 60% Ragga Khiyaamaynaya Xaaskooda ay leeyihiin caadooyin iyo dhaqan cadaan cadaan ah kaas oo kashifa khiyaamada Ragga gaar ahaan marka lagu jiro kulanka sariirta isaga oo muujiya calaamado iyo dhaqan lagu garto waxana ka mid ah.
1.Is Jeclida Kulanka Sariirta:
Ninka Khiyaamaya Xaaskiisa ayaa lagu gartaa in uu kaliya doonayo ka dhargista kulanka sariirta isaga oo aan wax dan ah ka lahayn dareenka xaaskiisa, waxana uu kaliya kulanka sariirta u gudanayaa kaliya waajiib saaran waxana ka maqnaanaya xiisaha iyo waliba jacaylka uu u muujinayo gacalisadiisa.
Ninka ayaan halkaas ku joogi doonin laakiin samaynaya dhaqano kale oo muujinaya khiyaamada sida in uuna wax dan ah ka yeelan xaaskiisa.
2.In Uu Si Khalad Ah U Sheego Magaca Gabadha Kale Inta Lagu Jiro Kulanka Sariirta:
Ragga ayaa sameeya khalad aad u weyn oo fashilin kara waana in uu xaaskiisa ugu yeedho magaca gabadha kale inta lagu jiro kulanka sariirta maadama uu iloobayo in uu la joogo xaaskiisa qalbigiisuna ku maqan yahay gabadha kale.
3.In Uu Mar Walba Ka Baxsado Xaaskiisa:
Marka uu Ninku Khiyaamo xaaskiisa waxa uu bilaabayaa in uu ka fogaado oo uu wakhti la qaadan waayo isaga oo isticmaalaya wado walba iyo been walba si uu uga baxsado garab jooga xaaskiisa waxana uu sababtaas u samaynayaa in uu ka fogaado in ay khiyaamadiisu soo baxdo.